1.2 I-Kotkas ngokumelene noMorgan
Ukugqiba ukuba ngubani ophethe ipropati ye-intanethi ngokuqhelekileyo ulungele ngqo. Omnye uthabatha igama lokubhalisa igama lesizinda kwaye uyahlawula iifizi zokubamba. Nangona kunjalo, kukho iimeko zamatyala sellelza ukuba kucace ukuba abanikazi bewebhusayithi kufuneka baqaphele kakhulu ukuseka nokugcina ubunini babo bhulogi kunye namaphepha eendaba ezentlalo murelumene nelo bhulogi.
I-phoneDog iyatsho ukuba i-akhawunti yemidiya yoluntu yinkampani impahla engagebonakaliyo ngelixa uKravitz echaza ukuba wadala kwaye wakha iphepha lokuzonwabisa loluntu kwi-Twitter kwaye ngoko ke.
Musa ukubopha igama lomsebenzi kumaphepha eendaba ezentlalo. Kuule meko, mis on aktiveeritud ekuthethwa jaoks yabizwa @PhoneDog_Noah. Ukuba inkampani inyanzelise kuphela, ityala belinokugqitywa ngokukhawuleza.
I-Kotkas ngokumelene noMorgan
Kwesinye imeko enomdla, inkampani yathenga umfazi ngegama le-Aagle kwaye yamqesha ixesha elithile. Mina olen linkedIn ukuba i-aagle yayisebenzisayo yayibophelelwe kwinkampani kunye neminqweno yakhe.
Xa la maqela mabini aphelayo ubudlelwane bawo, uMorgan wabamba ulawulo lwe-akhawunti ye-LinkedIn kwaye wala ukuvumela i-Eagle ukuba ibe nolawulo kuyo, esithi yayiyinxalenye yepropathi yenompisa kwaye yhenkampisa kwaye.
SEO.com – Ukuthengwa alla $ 5 yezigidi.
Hotels.com – domeen yazisa i – 11 dollarit, yezigidi emva kwe-2001.
I-VacationRentals.com – Umsunguli we-HomeAway uthenge i-domain nge-35 yezigidi zeedola ngokulula ukuze ayikhuphe kwizandla zokhuphiswano i-Expedia.
Umzekelo, enye usapho inokunyamekela ngakumbi ukuba kukho izikolo ezilungileyo kwindawo ngelixa enye ifuna inani elithile lokuhlamba. Umzekelo, ngaba ufuna ukufikelela kubafundi? Ke, umlinganiselo wakho unokuba ungakanani kubafundi abafunde kwaye baphendule kwizithuba. Natsi ezinye zeendlela onokuthi ulilinganise ixabiso lebhlog yakho:
Inani lezithuba seblogi
Ukwandisa abaTyeleli: Ukuqhuba ukugcwala kwi-blogi yakho kunokuba lula ukuba uthethe kunokuba kwenziwe kwaye kuhlala kunesiphumo sezinto ezahlukeneyo. Sisse oya kuyifuna ukuyenza kukwandisa igama lomlomo. Xelela usapho kunye nabahlobo malunga nebhlog yakho. Thumela amakhonkco kwimidiya yoluntu. Uya kufuna kwakhona ukufunda isithuba sikaVishnu Supreet Ukhuthazwe ii plugin ze-SEO KwiiWebhusayithi ze-WordPress kwi-2015 ukufumana ezinye iingcamango.
Ukwandisa ukuguqulwa kweentengisoUkufumana iindwendwe kwibhlog yakho kuphela kwesiqingatha sedabi. Ukuba ufuna ukwenza imali ibhlog yakho, ke kuya kufuneka ufumane abo bafundi ukuba bacofe kwikhonkco lokubhaliswa kweleta okanye uthenge imveliso. Funda isikhokelo esineenkcukacha sikaLuana Spinetti esineenkcukacha malunga nokuguqulwa kokwakha kunye nokunyaniseka okunesihloko I-37 Engagement Elements – UX, Ukuguqulwa, Ukunyaniseka.
Ukwandisa usetyenzisoIphepha lokukhangela elingaphambili kuyo nayiphi intambo yokukhangela kaGoogle linokubizwa ngokuba yi-kinnisvara. Ukuba iwebhusayithi yakho ayinakubekwa kwindawo ezintlanu eziphezulu okanye ezintandathu kwindawo yakho ye-niche, ngokuqinisekileyo awuyi kufumana ukugcwala okukhulu kuGoogle. Ukonyusa inqanaba lakho lweinjini yokukhangela ngumsebenzi onzima. UGoogle utshintshab abayifunayo phantse yonke imihla, emva kwayo yonke loo notto. Vaadake esebenzayo ngoku kwaye enokuthi isebenze kwixesha elizayo, nangona kunjalo, kukubhala umxholo ogqwesileyo.
Ukwandisa i-lingid: Ukuba awufuni ukuthembela kuGoogle okanye kuyo nayiphi na injini yokukhangela kuyo yonke itrafikhi yakho, ke ukutyala ixesha elithile ekwakheni i-backlinks smart. Ezinye zeendlela onokonyusa i-backlinks zibandakanya ukuphawula ezinye iibhlog (qiniseka ukuba ingxelo yakho iluncedo kwaye ayisixekile), isebenza njengebhlog yeendwendwe, kunye nokunxibelelana nabanye. Qiniseka ukuba iisayithi ezinxibelelana nawe ziziza ezisemgangathweni nazo.
Kwi-kinnisvara, kukho lawula iminyaka emihlanu othi ufanele uthengise indlu yakho kwaye uhlaziywe kwixabiso elibiza ngaphezu kweminyaka emihlanu okanye njalo. Le festile ikuvumela ukuba wenze inzuzo enkulu kwikhaya lakho kwaye uphucule ukuya kwelona likhulu ngemali encinane. Emva kwexesha, kwaye emva kokuphuculwa kwamanani amaninzi, uya kuba kwikhaya elikhulu ngeendleko ezifanayo, ucinga ukuba ulinganisa ubulungisa bakho ngexesha ngalinye.
Hlaziya amfefafa akho. Ziziphi ezona zithuthi? Yiyiphi enye inokufumana ubuncinci? Ngaba kukho nawuphi na oya kuphuculiswa, ahlaziyiweyo okanye apheliswe?
Yongeza entshasse. Enye yezinto ezinzulu malunga nokuthenga indlu entsha ufumana ibhantshi elinamanzi elwandle okanye i-pool-in-ground. Ungayongeza njani ibumbi elisezantsi kwiwebhusayithi yakho? Yintoni entsha kunye nokusika ongayongeza ukuba akukho mntu wenzayo okwamanje?
Yongeza "kwintsapho yakho." Enye yezinto eziphuculweyo ukuphucula indlu enkulu kukukwazi ukukhulisa ubungakanani bentsapho yakho, unomnye umntwana, okanye uhambe kumzali osekhulile. Ungayongeza njani kwintsapho yakho yoshishino? Ngaba kufuneka uqeshe umbhali ukuze udale iiposi ze-blogi ze-10 ngeveki esikhundleni se-5? Mhlawumbi ufuna i-PR ingcali ukukunceda ukhuthaze indawo yakho? Khangela iindlela zokongeza kwintsapho yakho.